आर्थिक अभावका कारण उपचार नपाउँदा बेवारिसे जीवन जिउन बाध्य नरेश यसरी भक्कानिएर रोएपछि (भिडियो हेर्नुस्) – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > आर्थिक अभावका कारण उपचार नपाउँदा बेवारिसे जीवन जिउन बाध्य नरेश यसरी भक्कानिएर रोएपछि (भिडियो हेर्नुस्)
admin July 30, 2020 July 30, 2020 जीवनशैली, भिडियो, समाज	0
मान्छेकाे जिन्दगी कहाँ नेर के हुन्छ थाहै हुदैन । भाग्यकाे खेल पनि उस्तै जसोतसो जिन्दगी चलाउने सुरसारमा जुटेकाे मान्छे, एक्कासी दैव लागेर निष्पट्ट अन्धकारमा डुबाइदिन्छ । न मृत्यु रोज्नु न अँध्यारो चिर्ने सामर्थ्य नै राख्नु । जिन्दगीका कैयन सपनाहरू एकातिर थाती राखेर बाँच्नकै लागि सँधर्ष गर्दा पनि भाग्यले साथ नदिएपछि मानविय जिन्दगी चलाउन मानविय हृदय भएका यहाँहरूसँग नपोखेर पनि के गर्नु? चोट जति लागेपनि आखिर बाँच्ने आश त सबैलाइ हुदोरहेछ!
यस्तै एउटा जिन्दगीकाे कथा लिएर आएका छाै यतिबेला । काठमाण्डाै जिल्ला दक्षिणकाली गाउँपालिका निबासी नरेश सिलवालकाे कथा हाे यो । उनि भर्खर ३७ बर्षका भए । लाउँ लाउँ र खाउँ खाउँ भन्ने बेलादेखि नै समस्यासँग जेलिएका उनि घरकाे आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण काम गर्न पोखरा पुगेका थिए ।
पोखरामा उनि मासु पसलमा काम गर्थे । मासु पसलबाट मासु घरघरमा पुर्याउन बाइक चलाएर जान्थे । एकदिनकाे कुरो हाे, साथीले भेट्न बोलाए । साथी भेट्न निस्केका उनि यस्तो दुर्दशा भोग्नु पर्छ भने सोचेका भए सायद साथीलाइ नै बोलाउँथे हाेला । तर भाग्यकाे खेल कस्ले नै जानेकाे हुन्छ र? साथी भेट्न निस्केका उनि एक्कासी बाइक ट्र्याक्टरमा ठोक्कियो सँगसँगै भाग्य पनि सँगसँगै ठोक्कियो । बजारिएका उनकाे दाहिने खुट्टा २ ठाउँबाट भाँचियो र दाहिने हात पनि ।
उपचारका लागि गण्डकी अस्पतालमा राखियो तर नभएपछि ट्रमा सेन्टरमा केरिब एक बर्षदेखि उपचार गराइरहेका छन् । उपचारमा काम गर्ने साहु र ट्र्याक्टरवालाले पनि सकेको सहयोग गरेकै थिए । आफुसँग भएका सबै रकम सकिए । घरमा दाइभाउजु पनि भूमिहिन छन् । उनिहरूकाे परिवार धान्नै धाै धाै छ । अरू सहारा केहि नभएका उनलाइ उपचार खर्च गर्दा गर्दै ऋणमा डुब्न पुगे । तर पनि अहिलेसम्म उनकाे उपचार सकिएकाे छैन ।
यतिबेला खुट्टाकाे समस्या विस्तारै हल हुदैछ भने हातकाे अपरेशन गर्नुपर्ने भनेर डाक्टरले केहि अगाडिदेखि नै भनिरहनुभएका छ । उहाँ भन्नुहुन्छः पैसाकै अभावमा अपरेशन गर्न सकिरहेकाे छैन । हातमा राख्नका लागि पाता हुन्छ रे, त्यति किन्ने पैसा भए अरू अस्पतालमा लाग्ने खर्च तर डाक्टर सरहरूले निशुल्क पनि मिलाइदिने भन्नुभएकाे छ । उपचारका लागि हातमा राख्ने पाता किनेर सहयोग गरिदिने पर्खाइमा हुनुहुन्छ नरेश सिलवाल । बाँकी भिडियोमै हेर्नुस्
एक्लिए प्रचण्ड, बादलले पनि किन यसरी बाईबाई गरे प्रचण्डलाई!
जब बमजनकाे आश्रम पुगेर छापा मार्दा प्रहरी नै पर्यो चकित (भिडियो सहित हेरी शेयर गर्नुहोस्)